Home - Sinnaanta waxay Bilaabataa Xili hore
U sheeg sharci dajinta inay maalgeliyaan waxbarashada hore ee muhiimka ah iyo daryeelka carruurta
Ku socoto: Xubnaha Sharci dajinta Gobolka Washington
Waxaan ku doodeynaa inaad mudnaanta siisid howlgelinta daryeelka carruurta muhiim ah iyo waxbarashada hore inta lagu jiro kulanka sharci dajinta xiggo.
Masiibooyinka COVID-19 waxay halmar si daran u wiiqday waxbarashada hore ee Washington iyo nidaamka daryeelka carruurta, taas oo horaan u yareyd oo aan ku filneyn, oo tilmaameyso muhiimad weyn oo daryeelka carruurta, sida waalidiin gobolka oo dhan ah waxay sameeyaan culeys aan horay loo arag oo maareynta labadaba shaqada iyo waqtiga buuxo ee carruurtooda.
71%ee dagayaasha Washington waxay dhaheen dheelitirka shaqada iyo daryeelka carruurta waa dhibaato aad dhab u ah oo daran.
In ka badan dhawrka bilood ee xiggo, Sharci dajinta waxay helayaan fursada lagu sameynayo maalgashiyo muhiim ah ee daryeelka carruurta iyo waxbarashada hore oo carruurta iyo qoysaska Washington.
Helitaan wanaagsan oo daryeelka carruurta la goyn karo, tayo sareeyo leh ma yareynayo kaliya murugada waalidiinta shaqeynayo, waxay sidoo kale sare u qaadeysaa ka soo kabsiga simman ee dhaqaalaha oo qof walboo ku nool Washington.
Hubinta adeegyada daryeelka carruurta muhiimka ah waxaa loo heli karaa shaqaalaha muhiimka ah
Yareynta farqiyada dhaqaalaha iyo jinsiyada waxaa ka sii darsiiyay cudurka safmarka
Siinta canug walba fursada ay ugu baahanyihiin inay ku guuleystaan
76% waxay ogolaadeen in daryeelka carruurta iyo dugsiga barbaarinta ay yihiin adeegyo muhiim ah oo aheyd in loo helo qoysaska shaqeynayo.
Iyada oo Washington ay ka soo kabsaneyso cudurka safmarka, ma goyn karno inaan gadaal uga tagno qoysaska shaqeynayo.
Fadlan taageer maalgashiyada muhiimka ah ee adeegyada waxbarashada hore iyo daryeelka carruurta muhiimka ah.
68% taageerada waxay kordhineysaa maalgashiga gobolka oo u ogolaanayo in waalidiinta awoodaan inay u soo diraan carruurtooda barnaamijka waxbarashada hore ee dooqooda ah.
71% ee dagayaasha Washington waxay dhaheen dheelitirka shaqada iyo daryeelka carruurta waa dhibaato aad dhab u ah oo daran.
Waa maxay Halista
Ka soo kabsiga Dhaqaalaha
Bixiyayaasha Daryeelka Carruurta
Sinnaanta Jinsiga iyo Sinjiga
Carruurta waxay u qalmaan daryeel simman iyo fursadaha waxbarashada, gaar ahaan inta lagu jiro waqtiyada hubaal la’aanta ah.
Haddii ku dhawaad 1/3
oo bixiyayaasha carruurta si joogta ah u xiraan,
carruur waxaa looga tagayaa boos la’aan.
Waalidiinta shaqeynayo waxay qaadaan culeys dareen iyo dhaqaale haddii aysan jirin daryeelka carruurta.
oo hooyooyin ah
waxay dhaheen waxay u baahanyihiin daryeelka carruurta si markaas ay ugu suurtogasho inay sameeyaan shaqadooda.
Washington dib uguma soo laaban karto marinka illaa waalidiinta dib ugu soo laaban karaan shaqada.
Bixiyayaasha daryeelka carruurta waxay gaarayaan diiwaan dalab sareeyo, weli xarumaha daryeelka carruurta waxay ku xirayaan heer degdeg ah.
oo xarumaha daryeelka carruurta
ee Mareykanka way lumi karaan, sida waafaqsan Xarunta Hormarka Ameerikaanka.
Covid-19 wuxuu geliyay waxyeelo ganacsiyada, oo ku qasbayo go’aamo adag.
Tirada dumarka ee u shaqeynayos sida bixiyayaasha daryeelka carruurta waxay hoos u dhacday .25 milyan tan iyo markii oo laga yaabo inay mataleyso 20% hoos u dhaca shaqada.
Cudurka safmarka wuxuu ka sii darsiiyay sinnaan la’aanta jinsiga iyo sinjiga ee jiray COVID-19 ka hor.
Qaran ahaan, 93% oo shaqaalaha daryeelka carruurta waa dumar, iyo 45% waa Madow, Laatiino, ama Aasiyaan. Tan iyo Febraayo 2020, dumarka waxay lumiyeen shaqooyin 5.5 milyan saafi ah.